Kismaayo oo sanadkan si xorriyad leh looga ciidayo | SNTV
Posted October 26, 2012 by admin in News
Kismaayo oo sanadkan si xorriyad leh looga ciidayo
Ummadda ku nool Kismaayo oo sanadkan si farxad iyo xoriyad leh u ciideeysa kadib markii laga xoreeyay cadowgii Shabaab.
Taliyaha ciidammada Jubbooyinka ee dowladda Federaalka Soomaaliya General Ismaaciil Saxardiid oo wareysi siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciiddan ay wax badan uga baddellan tahay shacabka reer Kismaayo, isla markaana ay si weyn u maamuusayaan manaasibadda Ciiddul Adxa, isagoo intaa raaciyey in ciidamamda dowladda ay ilaalinayaan xorriyadda shacabka, cid walbana sida u qorsheysan ay u damaashaadi doonto.
Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka raxiiqay in dhawaan ay soo gabagabeyn doonaan howlgallada Jubbooyinka shacabka deegaannada ay Al-Qaacidda ku dhuumaaleysanayaan ku nool, ay heli doonaan xorriyad ballaaran.
Dhinaca kale General Ismaaciil Saxardiid ayaa xusay in dhaq dhaqaaqa gamnacsi ee magaalada Kismaayo uu caadi ku soo laabtay, iyadoo Dakedda Weyn ee magaaladaasi dib loo howlgeliyay taas oo in muddo ah ay si gaar ah u adeegsanjireen Xag-jiriinta Al-Shabaab, laakin hadda ay tahay Daked loogu adeego danaha umadda Soomaaliyeed.
Kismaayo oo kaliya ma ahan magaalooyinka nasiibka u yeeshay in ay si xorriyad leh uga damaashaadaan farxadda munaasibadda weyn ee Ciiddul Adx, waxana tirakoob laheyn magaalooyinka maanta oo kale sida weyn looga maamuusayo farxaddan ay leeyihiin shacbaka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Muslimiinta ah